musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Italy uye kusarudzwa kweUNWTO Secretary General
Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Musi waNdira 19, 2021, Executive Council yeUNWTO (World Tourism Organisation) inofanirwa kugadza anotevera Secretary General weUNWTO, musangano uchafanirwa kugamuchirwa muna Gumiguru neGeneral Assembly yenyika dziri nhengo.
MuItaly, nguva yekupedzisira iyi haina kumutsa kufarira kwakawanda sekunowanzoitika nezviitiko zveUnited Nations zvine hurongwa hweUNWTO. Iri isangano rinogara muSpain iro Francesco Frangialli aive Secretary General kubva 1997 kusvika 2009.
Uku kushayikwa kwechido kunogona kushamisika kana tichifunga kuti munda weUNWTO wehunyanzvi uri wekutanga kukosha kuItari. Mu2019, yakapa 13% kuGDP, ichishandisa vanhu vanosvika mamirioni 4.2, uye tarisiro huru yaitarisirwa mugore ra2020 nekusiyaniswa kwezvinangwa zvevashanyi uye, zvinoshamisa kuti, zvakare yakanangana nekuve 2020 gore reItari -China tsika pamwe nekufungidzira kwe kuwedzera kwendege dzinoenderana.
Kufanotaura hakuna kuzadzikiswa uye chikamu chacho chaive pakati pekurwadziswa zvakanyanya nemhedzisiro yedenda re COVID-19. Kuderera kwemamirioni makumi matatu nematanhatu munzvimbo dzekune dzimwe nyika kwakakonzeresa kurasikirwa kunofungidzirwa kwemamirioni zviuru mazana masere emamiriyoni ayo muzana ane chikamu chekugara, maresitorendi, nemasevhisi anomiririra pamusoro pe34%. Iko kudiwa kwekudzora kupararira kwedenda kwakaranga kushanya kwemumba pasina akawanda makakatanwa.
Mhedzisiro pabasa yave inoshamisa. Pakati paJune 2019 naJune 2020, yakadzikira ne3.6% (841,000 mabasa) uye kweinenge chetatu, kuderera uku kunoitika kuchikamu ichi pamwe neyakaitika ye13% mukudya uye ingangoita 30% mudzimba.
Chikamu ichi, saka, chiri musimboti wekupora-denda kupora, uye iyo UNWTO ichave isingadziviriki kuve yakakosha mutambi Kana kufungidzira kwevakawanda vezvirwere zvepachokwadi kuri kwechokwadi, mhedzisiro yejekiseni ichashanda kusvika mukupera kwa2021 uye, nekudaro, Munyori Mukuru akasarudzwa achave nemutoro mukuru wekutungamira kupora.
Mune akanakisa epasirese, mumwe angatarisira kuti sarudzo yake iitwe nekusarudza kubva kune dzakasiyana siyana dzevamiriri. Zvinotoshamisa kuti izvi hazvizove zvakadaro. Kune vaviri chete vanokwikwidza: iyezvino Secretary General, VaZurab Pololikashvili vanobva kuGeorgia, uye Mutungamiri weSangano reCulture neAntiquities dzeBahrain, HE Mai Al Khalifa.
Uhu hausi humbowo hwekusafarira pachinzvimbo. Vamwe vanhu vatanhatu vakanga varatidzira vavariro yavo yekuendesa humbowo hwavo asi vakatadza kupa zvinyorwa zvinodiwa munguva yakapihwa nguva pfupi pakati pekuvhurwa nekuvharwa kwezvikumbiro.